बैठक प्रधानमन्त्रीनिवासमा होइन, पार्टी कार्यालयमा बस्नुपर्छ : वामदेव गाैतम – Nepal Japan
नेपाली समय : 08:01:41
जापानी समय : 11:16:41
9 December, 2018 12:50 | पत्रपत्रिका | comments | 19500 Views
दुवै अध्यक्षले बैठकमा फर्किन फोन गर्नुभएको थियो, तर हामी फर्किएनौँ
पार्टीको बैठक बोलाउने, पटकपटक स्थगित गर्ने र बैठक बस्ने दिन पनि पर्खाएर अपमान गर्ने परम्परा बसेको भन्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का चार शीर्ष नेताले केन्द्रीय सचिवालय बैठक बहिष्कार गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा शनिबार बोलाइएको बैठकमा पनि कुराएर अपमान गरिएको भन्दै वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बहिष्कार गरेका हुन् । यसै सन्दर्भमा नेकपाका वरिष्ठ नेता वामदेव गौतमसँग नयाँ पत्रिकाले गरेको संक्षिप्त कुराकानी:
तपाईंहरू चारजना नेताले किन बैठक छाडेर हिँड्नुभो ?
हामी किन हिँड्यौँ, सबैले देखेका छन् । धेरै कारण छन् । हामीले यो पार्टीलाई राजनीतिक पार्टीका रूपमा कसरी सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने शिक्षा दिनका लागि बैठक हुनुभन्दा पहिल्यै निस्किएर हिँडेका हौँं, बैठक बहिष्कार गरेका होइनौँ । बैठक बोलाउने, ३ घन्टासम्म कुराएर बैठक स्थगित गर्ने, दुवैजना अध्यक्ष उपस्थित नहुँदा बैठकै नबस्ने, सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीका कारण बैठक सरेकोस¥यै हुने, अब त्यो परम्परा तोड्नुपर्छ भनेर बैठक बहिष्कार गरेका हौँ ।
नौमध्ये चार नेताले बैठकै छाडेर हिँडेपछि अध्यक्षहरूले सम्पर्क गर्नुभएन ?
मलाई चाहिँ पछि दुवै अध्यक्षले फोन गरेर फर्किनुस् भन्दै बोलाउनुभयो । तर, हामी कोही पनि गएनौँ । मैले फर्किन्नँ भन्ने जवाफ फर्काएँ । हामी निस्किएपछि ५ जनाको बैठकले २९ गते स्थायी समिति बैठक बोलाउने निर्णय गर्नुभएछ ।
तपाईंहरू हिँडे पनि पाँचजनाको बहुमतले निर्णय भएको छ, त्यसले के अर्थ राख्छ र ?
आजसम्म हाम्रो पार्टीमा दुईजना अध्यक्षमध्ये एकजना उपस्थित नहुँदा बैठक नबस्ने, अनौपचारिक भेला मात्रै गर्ने परम्परा थियो । अब त्यो परम्परा तोडियो । अबदेखि दुईमध्ये एक अध्यक्ष मात्र उपस्थित हुँदा पनि बैठक बस्छ, पार्टी सञ्चालन हुन्छ । हामी नै बैठक बसाउँछौँ । कोरम पुगेको स्थितिमा बैठक बस्छ, निर्णय गर्छ । हामीसँग बदला लिनकै निम्ति उहाँहरूले निर्णय गरेको भए पनि पार्टीलाई अगाडि बढाउने सिलसिलामा सकारात्मक पहल नै भएको छ भन्ने हामीले बुझेका छौँ । यसले पार्टीलाई राम्रै गरेको छ ।
त्यसो भए बैठकको निर्णय मान्नुहुन्छ ?
किन नमान्ने ? कोरम पुगेर गरेको निर्णय मानिन्छ नि । हाम्रै बारेमा या मेरै बारेमा पनि जे निर्णय बैठकले गरेको छ, त्यो मान्छु, तर निर्णय विधिवत् ढंगले गरिएको हुनुपर्छ । अबका दिनमा प्रधानमन्त्रीले समय निकाल्न सक्नुभएन भने बाहिर रहनुभएका अध्यक्षको नेतृत्वमा बैठक बस्छ, निर्णय गरिन्छ । हाम्रो उपस्थितिविनाको निर्णयले यो परम्परा बसालेकाले अब पार्टी सकारात्मक ढंगले अघि बढ्छ ।
यो प्रकरणले पार्टीमा के संकेत गरेको छ ?
चारजनाले बैठक बहिष्कार गरेको होइन, उहाँहरूको शैलीलाई बहिष्कार गरिएको हो । अध्यक्ष पदका कारण उहाँहरू वरिष्ठ हुनुहुन्छ । आन्दोलनको हिसाबले, अरू धेरै हिसाबले उहाँहरूको समकक्षी कमरेडलाई ३ घन्टासम्म कुराइएको इतिहास छ । मुख्य कुरा अबदेखि त्यस्तो स्थिति समाप्त भएको छ । कसैलाई कुराउनुहुने छैन, समयमा आउनुहुनेछ, त्यो परम्परा बस्छ ।
सरकारीनिवास बालुवाटारमा बैठक बसेकोमा पनि आपत्ति हो ?
शनिबार हामीले त्यो कुरा उठाउन पाएनौँ । तर, भविष्यमा उठाइनेछ । हरेक बैठक प्रधानमन्त्रीनिवासमा हुन सक्दैन, पार्टी कार्यालयमै बस्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । आगामी सचिवालय बैठकमा म यो कुरा राख्छु । प्रधानमन्त्री शक्तिशाली हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्रीनिवासमा बैठक बस्छ, अनि अनेक हिसाबले त्यो प्रभावित हुने स्थिति पार्टी कार्यालयमा बस्दा हुनेछैन, त्यसैले पार्टी कार्यालयमै बैठक बस्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री पार्टी कार्यालय जान सक्नुभएन भने अर्को अध्यक्षको नेतृत्वमा बस्छ ।
प्रदेश कमिटी सदस्यहरूको नाम सार्वजनिकबारे तपाईंको के प्रतिक्रिया छ ?
त्यसरी नाम सार्वजनिक गर्नै हुन्नथ्यो । हामी स्थायी समितिमा दृढतापूवर्क मत राख्छौँ । त्यो परम्परा तोड्नुपर्छ । स्थायी समितिले अधिकार प्रत्यायोजन गरेको अवस्थामा मात्रै सचिवालयले निर्णय गर्न पाउँछ । स्थायी समितिले नै निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राखिन्छ । सार्वजनिक गरिएको नामको सूची स्थायी समितिबाट अनुमोदन गर्नुपर्छ ।
नेकपामा दुर्इ अध्यक्षको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि चुलियो : चार शीर्ष नेताद्वारा बैठक बहिष्कार